एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, अर्को सुनुवाई कहिले ? | गृहपृष्ठ
Home समाचार एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, अर्को सुनुवाई कहिले ?
on: १२ बैशाख २०७६, बिहीबार १६:०२ समाचार
वैशाख १२, काठमाडौं (अस) । एनसेल प्रा.लि.बाट तत्काल कर नअसुल्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले बढी कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै त्यसका विरुद्ध एनसेलका तर्फबाट दायर भएको रीट निवेदनको बिहीवार न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाई भएको हो ।
न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले रीट निवेदन उपर थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न एनसेललाई दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अब वैशाख २३ गते ठूला करदाता कार्यालय लगायतका विपक्षीलाई थप छलफलका लागि अदालत बोलाएको छ ।
यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेलले तिर्न बाँकी रहेको लाभकर बापत ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा सात दिनभित्र बुझाउन भन्दै पत्र लेखेको थियो । एनसेलले भने आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने दाबी गर्दै वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रीट निवेदन दायर गरेको हो ।
एनसेलको रीटमाथि सर्वोच्चमा बहस शुरु
एनसेलबाट कर नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
१३ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:१५
१२ बैशाख २०७६, बिहीबार १२:२५